Imifanekiso evuzayo yeHuawei Nova 4: le iya kuba yifowuni | I-Androidsis
Le iya kuba yiHuawei Nova 4: umngxunya kwiscreen, i-bezels ezimbalwa kunye nokunye malunga noluhlu oluphezulu olulandelayo
Omnye ukuvuza kutsha nje ityhile zonke iinkcukacha zeHuawei Nova 4 elandelayo, isiphelo esilandelayo senkampani esiza kubhengezwa ngokusesikweni ngoDisemba 17.
Ngoku Imifanekiso eliqela yeNova 4 iye yavela. Ngokutsho kwezi zinto, iselfowuni iya kubonelela ngendawo enkulu yescreen, kuba iya kuba nescreen ngaphandle kwenotshi enesinqunqwana esinqunyiweyo sekhamera ye-selfie, njengoko kulindelwe. Ukongeza, enye idatha iyacaciswa. Siyakwandisa!
Ifowuni iya kufumaneka apha ezine umbala ongakhetha kuzo: I-Fritillaria White, i-Suyin Blue, i-Honey ebomvu kunye noMnyama oMnyama. Iinguqulelo ezisandula ukuvuza zeHuawei Nova 4 ziye zavela ukuze ziqinisekise umahluko wemibala kwaye zityhile uyilo lwangaphambili nolwangasemva.
IHuawei Nova 4 cinezela ukuvuza ukuveza oko Iimodeli zeFritillaria White, i-Suyin Blue kunye ne-Honey Red ziindidi zemibala ethandwayo. Umhlophe ubonakala njengomxube ohlaza okwesibhakabhaka, opinki, nomthubi. Umahluko oluhlaza okwesibhakabhaka ubonakala uluhlaza ngaphezulu nangombala oluhlaza okwesibhakabhaka ukuya emazantsi. Uhlobo oluBomvu oluBomvu ngumxube obomvu nemfusa. Uhlelo oluMnyama oluMnyama lumnyama ngokupheleleyo.
Iglasi emva kweHuawei Nova 4 inezinto zokufunda ngomnwe kunye Icwangciswe ngokuthe nkqo iseti yekhamera kathathu. Imibhalo ethi "48MP AI Camera" kunye "noHuawei" nayo ikrolwe kwiphaneli yangasemva yefowuni. Umphambili wale nto uthathwe kakhulu ngumboniso wekhamera yescreen esine-bezels ezijikelezileyo, phantse azikho. Apha ngezantsi kukho urhwebo lwaseburhulumenteni lwamva nje kwifowuni.
Inguqulelo ende yeHuawei Nova 4 izakufika nge-48-megapixel + 16-megapixel + 2-megapixel system triple camera, ngelixa imodeli esemgangathweni iya kuthi ixhotywe nge-20-megapixel + 16-megapixel + 2-megapixel unit camera camera . Ukucaciswa okuseleyo kulindeleke ukuba kufane kwiimodeli zombini. INova 4 iya kuxhaswa yi I-chipset ye-Kirin 970I-8 GB ye-RAM kunye nebhetri eyi-3,750 mAh ene-18-watt yokuhlawula ngokukhawuleza. Iya kuba nokugcinwa kwe-128GB eyakhelweyo kunye nekhadi le-MicroSD slot yendawo engaphezulu.
Emva koko Isixhobo siya kuxhobisa isikrini se-19.25: 9 FHD +. Oku kuyakuhlala ikhamera yangaphambili ye-megapixel engama-25. I-smartphone iya kuhlawuliswa I-Android 9 Pie, ngelixa ixabiso layo lingekaveli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Le iya kuba yiHuawei Nova 4: umngxunya kwiscreen, i-bezels ezimbalwa kunye nokunye malunga noluhlu oluphezulu olulandelayo
Kuphela yiGPS S10 Lite eya kufumaneka ngombala omthubi
Ngoku ungabukela i-YouTube, iFacebook kunye ne-Instagram iividiyo ngaphakathi kuWhatsApp ngenxa yemowudi yePiP